विद्यार्थीले स्मार्ट सिटी बनाएपछी सबै जना दङग ! -विद्यार्थीले स्मार्ट सिटी बनाएपछी सबै जना दङग ! -
३ माघ २०७६, शुक्रबार ०६:३२ मा प्रकाशित
पाेखरा, ३ माघ । नेपालमा ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने चर्चा बढी नै हुने गर्दछ । अधिकांश सर्वसाधारणलाई स्मार्ट सिटी कस्तो हुने हो थाहा छैन । यही वास्तविकतामा यहाँको एक विद्यालयका विद्यार्थीले स्मार्ट सिटीको नमूना तयार गरी अभिभावकलाई दङ्गै पारेका छन् ।
पोखरा महानगरपालिका–३३ का वडाध्यक्ष एवं विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष शिवप्रसाद आचार्यले प्रदर्शनीमा विद्यार्थीका अन्तरनिहित क्षमता प्रष्फुटित भएको बताउनुभयो । उहाँले पछिल्ला समयमा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी घट्दै गएको वास्तविकतामा सङ्ख्याभन्दा पनि कसरी शैक्षिक गुणस्तर बढाउने हो त्यसतर्फ चिन्ता गर्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो । – रासस
पोखरा महानगरद्वारा लकडाउनको समयमा वितरण गरेको राहत रकम सार्वजनिक
गण्डकी प्रदेशमा हालसम्म दुई हजार ४५ को पिसिआर जाँच
गण्डकी प्रदेशसभाको बर्खे अधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा
मनकारी वडाध्यक्ष लामा, दैनिक एक हजारलाई खाना खुवाउँदै